“အစိုးရ တာဝန်​ရှိသူများ ဝင်​​ရောက်​စစ်​​ဆေးသင့်​တဲ့ ဂျပန်​ဘုရား” – ထပ်မံရင်ဖွင့်သံတစ်ခု...! - Thadin
HomeNEWS“အစိုးရ တာဝန်​ရှိသူများ ဝင်​​ရောက်​စစ်​​ဆေးသင့်​တဲ့ ဂျပန်​ဘုရား” – ထပ်မံရင်ဖွင့်သံတစ်ခု…!
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on “အစိုးရ တာဝန်​ရှိသူများ ဝင်​​ရောက်​စစ်​​ဆေးသင့်​တဲ့ ဂျပန်​ဘုရား” – ထပ်မံရင်ဖွင့်သံတစ်ခု…!
ဒီကနေ့၁၃ရက်နေ့နေ့လည်ပိုင်းဘုရားဖူးသူများအား ကျောင်းအဝင်လမ်းများပေါ်၌၁နာရီအနည်းဆုံးတန်း စီထားကာလူများပြီဆိုကာမှကျောင်းတွင်းဝင်စေပြီး အတန်းလိုက်ထိုင်ခိုင်းထားပြီးအလှူပေးဖို့ရန်တစ် ယောက်ခြင်းစီရှေ့အထိလူအများရှေ့အားနာပြီး ထည့်အောင်စီမံထားပါသည်။ လူဆုံးလဲသွားရော နောက်တစ်ခါလှေအတွင်းလာရောက်အလှူငွေ ထည့်ကြပါရန်ထပ်တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်။
ဖုန်းမရိုက်ဖို့ဖုန်းမဆက်ဖို့ကိုလဲခဏခဏပြောပါတယ်။အဲဒိလှေထဲငွေလှူခိုင်းပြီးသည်နှင့်တတိယနောက် တစ်ကြိမ်ဓာတ်ပုံပေးပြီးအလှူထပ်ခံပြန်တယ်။ ပြန်မည်လုပ်သူများကိုလည်းအပြန်မခံ အပေါ်ထပ်တက်ပြီးဘုရားဖူးတော့မည်ဆိုလည်း အထမခံအနည်းဆုံး၁နာရီနည်းပါးလောက်ထပ်ထိုင် နေရပါတယ်။
အမှန်ရှေးဘုရားများဖူးစေချင်ပါက လူစုခိုင်းမထားပဲ အရင်ရောက်သူဖူးပြန်ပေါ့ အလှူများလာရောက် လှူတန်းနိုင်ပါတယ်ဆို ဒါဟာဘုရားသဘောကျ အလှူခံတာဖြစ်လို့လှူသူလည်းကုသိုလ်ရ အလှူခံသူလည်းကုသိုလ်ရပေါ့။ အခုဟာကတော့အားလုံးထိုင်ခိုင်းပြီးပါသမျှထုတ်ဆိုဓါးပြတိုက်သလားပဲ။
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်သောဓာတ်ပုံဟာ သာသနာငြိုးနွမ်းသွားမှာစိုးပြီးအရဲစွန့်ရိုက်ပေးထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလာဆူလို့ဖုန်းပိတ်တာပါလို့ လိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာပြုလို့အရိုက်မခံတာလဲဆိုတာ သာသနာရေး တာဝန်ရှိသူများ ရိုးရိုးဘုရားဖူးပုံလုပ်ကာလေ့လာပြီး အချိန်မှီသာသနာပြုပါအူးလို့တင်ပြပါရစေ…
Writer – KM Lwin
ဒီကနေ့၁၃ရကျနနေ့လေ့ညျပိုငျးဘုရားဖူးသူမြားအား ကြောငျးအဝငျလမျးမြားပျေါ၌၁နာရီအနညျးဆုံးတနျး စီထားကာလူမြားပွီဆိုကာမှကြောငျးတှငျးဝငျစပွေီး အတနျးလိုကျထိုငျခိုငျးထားပွီးအလှူပေးဖို့ရနျတဈ ယောကျခွငျးစီရှအေ့ထိလူအမြားရှအေ့ားနာပွီး ထညျ့အောငျစီမံထားပါသညျ။ လူဆုံးလဲသှားရော နောကျတဈခါလှအေတှငျးလာရောကျအလှူငှေ ထညျ့ကွပါရနျထပျတောငျးဆိုပွနျပါတယျ။
ဖုနျးမရိုကျဖို့ဖုနျးမဆကျဖို့ကိုလဲခဏခဏပွောပါတယျ။အဲဒိလှထေဲငှလှေူခိုငျးပွီးသညျနှငျ့တတိယနောကျ တဈကွိမျဓာတျပုံပေးပွီးအလှူထပျခံပွနျတယျ။ ပွနျမညျလုပျသူမြားကိုလညျးအပွနျမခံ အပျေါထပျတကျပွီးဘုရားဖူးတော့မညျဆိုလညျး အထမခံအနညျးဆုံး၁နာရီနညျးပါးလောကျထပျထိုငျ နရေပါတယျ။
အမှနျရှေးဘုရားမြားဖူးစခေငျြပါက လူစုခိုငျးမထားပဲ အရငျရောကျသူဖူးပွနျပေါ့ အလှူမြားလာရောကျ လှူတနျးနိုငျပါတယျဆို ဒါဟာဘုရားသဘောကြ အလှူခံတာဖွဈလို့လှူသူလညျးကုသိုလျရ အလှူခံသူလညျးကုသိုလျရပေါ့။ အခုဟာကတော့အားလုံးထိုငျခိုငျးပွီးပါသမြှထုတျဆိုဓါးပွတိုကျသလားပဲ။
အခုကြှနျတျောတငျပေးလိုကျသောဓာတျပုံဟာ သာသနာငွိုးနှမျးသှားမှာစိုးပွီးအရဲစှနျ့ရိုကျပေးထား ခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒါလာဆူလို့ဖုနျးပိတျတာပါလို့ လိမျခဲ့ရပါတယျ။ ဘာပွုလို့အရိုကျမခံတာလဲဆိုတာ သာသနာရေး တာဝနျရှိသူမြား ရိုးရိုးဘုရားဖူးပုံလုပျကာလလေ့ာပွီး အခြိနျမှီသာသနာပွုပါအူးလို့တငျပွပါရစေ…
This Year : 232788
Total Users : 591812
Total views : 2715596